Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Luulyo, 2014, 04:32 GMT 07:32 SGA
Liibiya: Ra'iisul wasaaraha oo iscasilayo
Ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan loo magacaabay waddanka Liibiya Cabdallah al-Thinni ayaa sheegay in uu xilka iska casilayo.
Ukraine: Saldhigyo booliska laga qabsaday
Maleeshiyaad taageersan Ruushka ayaa qabsaday saldhigyo ay booliska ku leeyihiin magaalada ku taalla bariga Ukraine ee Kramatorsk.
Qaraxyo dad ku dilay Hindiya Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo miino, oo laga shakisan yahay in ay ku aaseen jabhad gooni ugoosad ah, gobolka ku yaalla bariga Hindiya ee Chhattisgarh.
Dowladda iyo mucaaradka Suuriya ayaa midba midka kale ku eedeeyay in ay u isticmaaleen gaaska sunta ah weerar Jimcihii dhacay.
Xiisada bariga Ukraine oo kacsan
Rag hubeysan ayaa qabsaday dhismaha xarunta nabadsugidda ee magaalo ku taalo bariga Ukraine 12 Abriil 2014
British iyo Faransiis lagu dilay GaalkacyoMaqal04:51
UN: Aftida Crimea waa sharci darro
Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa u codeeyay qaraar qeexaya in ay sharci darro aheyd aftidii uu Ruushka taageeray ee Crimea.
Abaanduulaha ciidammada qalabka sida ee Masar, Cabdulfataax al-Sisi ayaa shaaciyay in uu iska casilay militariga dalkaasi.
Khilaaf hareeyay xisbiga MDC ee Zimbabwe
Mucaaradka ugu weyn dalka Zimbabwe, ee MDC ayaa qarka u saaran in uu kala jajabo markii labaad tan iyo markii la asaasay 1999-kii.
G8 ayaa meesha ka baxday, kaddib kulan si ula kac ah looga saaray waddanka Ruushka, misana la baajiyay shirkii Sochi.